Iphaneli yokuhombisa yeAluminiyam |Zhongming Jixiang Construction Material Equipment Co., Ltd.
I-Zhongming yinkampani yeqela lobuchwephesha edibanisa uyilo, uphando, ukuvelisa kunye nokuthengisa iiphaneli ze-aluminiyam-yeplastiki, iiphaneli ze-aluminiyam ezomeleleyo, kunye neesilingi ze-aluminiyam.
Xa kuthelekiswa nezinye izinto zokuhombisa, ipaneli ehlanganisiweyo ye-aluminium luhlobo olutsha lwezixhobo ze-adomments ezinenzuzo eninzi engenakuthelekiswa nanto. Esinye isizathu kukuba i-Aluminiyam i-Panel ye-composite luhlobo lwezinto ezidibeneyo. .Esinye isizathu kukuba ipaneli ehlanganisiweyo ye-aluminium luhlobo lobugcisa obuphezulu bemveliso.Nokuba imveliso okanye isicelo, iqulethe umxholo ophezulu wobugcisa.Isebenzisa iteknoloji ephezulu kwimveliso yokuqinisekisa ukusebenza kwemathiriyeli ngokupheleleyo, njengokwaleka kwe-roller. iteknoloji kunye neteknoloji ye-laminating eqhubekayo
Ubukhulu: 2mm, 5mm, 6mm
Ububanzi: 1250mm, 1500mm, 2000mm
Obona bude bubuninzi≦6000mm
Ubunzima obulula kunye no-hukuqina
Umbala ohlukeneyo kunye neDemokhrasi
Ukuguda okuhle komphezulu
Iimpawu ezibalaseleyo zokukhusela umlilo
Iimpawu ezilungileyo zeendleko
Udonga lwamakhethini, i-cladding kunye ne-facade
Umphetho wophahla kunye nodonga lweparapet
Ukwahlula udonga kunye nokwahlulahlula
Ipleyiti yeNtengiso, igumbi lokubonisa, ifenitshala kunye neMiqondiso
Izigqubuthelo zekholamu kunye nezisongelo zemiqadi
Inkqubo yesilingi yeAluminiyam
Inkqubo yesilingi yethayile yokubeka
Ithayile ebekwe ngaphakathi intle, ithambile, iindidi ezahlukeneyo ezinothintelo lomlilo olugqibeleleyo, umsebenzi wobungqina bokufuma, kulula ukucocwa, ilungele ukudityaniswa kunye nokudityaniswa, ilungele ngakumbi ukulungiswa komgca. Isebenza kwizikolo zeofisi, iibhanki ,udederhu lweevenkile kunye nezinye iindawo.Iintlobo ngeentlobo zemibala kunye neenkcukacha ziyafumaneka
Inkqubo yesilingi ye-Clip-in tile
Isilingi ye-Clip-in tile enesakhelo esifihliweyo, ithatha inkqubo yokunqunyanyiswa kunye nesilingi ecinezelwe kwisakhelo esifihliweyo, esilungele ukufakela kunye nokudityaniswa kwe-dissembly, bhetyebhetye kakhulu ngelixa usenza utshintsho kwisithuba segumbi. Isakhiwo sesakhelo esifihliweyo. Inkqubo yokuxhoma izinzile kwaye ifihliwe, umphezulu wepaneli ugudileyo kunye nomgca omfutshane kunye nomhle, owongeza ingqiqo yangoku yendawo yangaphakathi. Kukho imilinganiselo yephaneli eyahlukeneyo kunye neemodeli ezihambelana noyilo kunye nemfuno eyahlukileyo, inokusetyenziswa ngokubanzi iintlobo ezahlukeneyo zoyilo lokuhombisa lwezakhiwo
Inkqubo yebhaffle yombhobho wequadrate
Isilingi yombhobho we-quadrate-baffle yenziwa ngokuqengqeleka okuqhubekayo okanye ukugoba okubandayo, isakhelo sofakelo sisixhobo esikhethekileyo se-keel clip buckled structure.Indlela yofakelo ilula kwaye ifanelekile kwaye ifanelekile kumhombiso wangaphakathi. kunye neempawu zokuhombisa ezinefashoni yanamhlanje kunye nokusebenza okukhokelayo.Ngobude kunye necala lepleyiti yomphezulu, kunye nokutshintsha kwezibane imibala, isilingi enqunyanyisiweyo ingena kakhulu kwaye inamandla.
Inkqubo yesilingi ye-O-shape baffle
Le nkqubo inebala elivulekileyo lombono, imigca ejikelezayo ejikelezayo iqaqambile kwaye ithambe, emva kofakelo, yonke indawo iyahambelana kwaye intle ngaphandle kokuswela ukuqonda okugudileyo kumacala amathathu kwimigca, ibambe ukusebenza kakuhle kwengqiqo yanamhlanje; isakhiwo, esilungele ukugcinwa;Ibha nganye esetyhula izimele, izixhobo zokucima umlilo zinokubekwa kwisilingi, ukufezekisa ukusebenza okubonakalayo okuhambelanayo okupheleleyo.Isetyenziswa kakhulu kwisikhululo sikaloliwe esihamba ngesantya esiphezulu, izikhululo zikaloliwe ezinesantya esiphezulu, izikhululo zebhasi, isikhululo seenqwelomoya, iindawo ezinkulu zokuthenga, iitshaneli, ukuhombisa udonga, udonga lwangaphandle lwesakhiwo njl.njl.
Inkqubo yesilingi emile okwe-U
Isilingi yohlobo lokuhombisa umkhusane, ekwaziyo ukulungelelanisa ubude obubonakalayo ukuba yindlu, kwaye inokufihla yonke imibhobho kunye nezinye izixhobo ezisezantsi kwesakhiwo, kwaye inokukhokelela ekukhanyeni kwelanga okanye ukukhanya kwesibane. kunye nokuhamba komoya, imigca yoqhagamshelo iqaqambile kwaye icocekile, inamanqanaba acacileyo .ebonisa isitayile sanamhlanje esifutshane, esilula kwaye esifanelekileyo kwindibano yokufakela kunye nokudityaniswa, ibe yeyona mveliso idumileyo kwimarike yokuhombisa.
Inkqubo yesilingi ye-V-shape baffle
VIsilingi yebhaffle ithathela ingqalelo ngokupheleleyo izinto ezahlukeneyo zokuhombisa kwiindawo zikawonke-wonke, kuthathelwa ingqalelo iimfuno ezibonakalayo kunye neemfuno ezibonwayo; imveliso kulula ukufakwa, imathiriyeli yomelele kulwandiso lokusebenza, yenze isitayile esikhethekileyo kunye nesiphumo esinqamlezayo sazo zonke iintlobo. yezibane kunye nezixhobo zokucima umlilo, ibonise ubunewunewu kunye nesimbo esilula ngengqiqo yesisa, ngoko ke iyakwazi ukusetyenziswa ngokubanzi.
Amacandelo e-Scaffolding eRinglock, Kwikstage Scaffolding Accessories, I-Scaffolding Adjustable Screw Jack, Ikhonkco le-Ringlock scaffolding Bracket, Plastic Formwork For Column, Izahlulo zesikafula esinemisonto yeBase Jack,